MAXAA KA JIRA IN DIBADBAXYO KALE LAGA DIYAARINAYO GOOBO ITOOBIYA KA MID AH? | Faafan News
MAXAA KA JIRA IN DIBADBAXYO KALE LAGA DIYAARINAYO GOOBO ITOOBIYA KA MID AH?
ADDIS ABABA – Mareegaha wararka ee taageera mucaaradka Itoobiya ayaa tibaaxay in ugu yaarn 8 qof ku dhinteen qulqulatooyin ka dhacay soonka Hararghe oo ka mid ah ismaamulka Oromiya. Xogaha laga helayo degmooyinka Awadey iyo Bedhesa ayaa tilmaamaya in ay halkaas ka dhaceen banaabaxyo laga soo horjeeda dawlada todobaadkii hore.
Xogaha kooxaha mucaaradka ah ka soo yeedhay ayeyna inta badan dawladu ka hadal taas oo dhalisay in aan wararkaas si madaxbanaan loo xaqiijin karin.
Ciidamada dawlada ayaa rasaas ku fuaray dad isugu soo baxay degmooyinka Awaday iyo Badhesa maalmihii Axadii iyo Taladadii shalay ahayd halkaas oo ay ku dhinteen 8 qof.
Dhacdada ayaa ku soo aaday xilli weli aad loo hadal hayo dibadbax weyn oo Axadii hore gilgilay magaalada Gonder iyada oo dadku dalbadeen in xukuumadu sii deyso maxabiista Wolqeyt islamarkaana cadaadiska laga joojiyo shacabka Oromada iyo muslimiinta dalka oo labaduba ku caanbaxay dibadbaxyo dawlada lagu diidan yahay.
Masuul u hadlay maamulka gobolka Axmaarda ayaa colka wararka u sheegay in cabashooyinka dadweynaha ee la xidhiidha maamul-xumada wax laga qaban doona. Masuulka ayaa dhanka kale tilmaamay in dadka baanbaxaye ay wateen calan aan dalka sharci ka ahayn. Banaabax Gonder ayaa la qabtay iyada oo xukuumadu aaanay raali ka ahayn.
Dhanka kale, waxaa jira warar sheegaya in dibadabaxyo kale laga qabanqaabinayo goobo ka mid ah Oromiya iyo gobolka Axmaarada Sabtida ama Axada, balse lama hubo in dawladu yeeli doonto iyo in kale. Waxaa kale oo aan la saadalin karin in dadweynuhu iska dhigatirayaan amarka xukuumada iyo talaabada ciidanka dawladu qaadi doono.
Shacabka dalka ayaa xukuumada ku cadaadinaya in wax laga qabto musuqmaasuq dalka ku baahay, maamul-xumada iyo xuquuqada aadanaha .
Dawlada ayaa dhankeeda garowsatay in ay jiraan khaladad u baahan in wax laga qabto iyada oo ballanqaaday in gafafka la saxayo, hasayeeshe dadweynaha ayaa tiigsaday balaanqaadyada xukuumada oo aan weli la fulin.
Xukuumada dhaxe ayaan ka hadal banaanbixi Gonder iyada oo hadda ka hor ku eedesay Eritrea iyo wax ay ugu yeedhay xoogaga nabadiidka ah in ay qas ka wadaan goobo dalka ah.